I-Sudafed vs. Mucinex: Umehluko, ukufana nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Septhemba 2021
Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izindaba Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Ezemidlalo Ezisindayo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Umphakathi Imidlalo Inkampani Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Inkampani, The Checkout Umphakathi, Inkampani Ezempilo Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Izindaba, Wellness Ezokuzijabulisa
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Sudafed vs. Mucinex: Umehluko, ukufana nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Sudafed vs. Mucinex: Umehluko, ukufana nokuthi yikuphi okungcono kuwe
UdidekilefuthiUMucinexyimithi emibili ethandwa kakhulu e-over-the-counter (OTC) ekwelapheni izimpawu ezihambisana nokubanda okuvamile njengokucinana kwamakhala nesifuba, ikhala eligijima nokukhwehlela.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kweMucinex vs. Sudafed?
I-Sudafed iqukethe isidambisi samazinyo esibizwa nge-pseudoephedrine (kukhona nemishini emisha equkethe i-phenylephrine, eneSudafed-PE njengegama lomkhiqizo). I-Sudafed isiza ukukhulula ikhala eligcwele.
I-Mucinex (amakhuphoni e-Mucinex | Imininingwane ye-Mucinex) iqukethe i-expectorant ebizwa guaifenesin . IGuaifenesin isiza mncane futhi ikhulule ukuminyana kwesifuba lapho une- ukukhwehlela kwe-phlegmy . Okunye ukwakheka kweMucinex nakho kuqukethe ezinye izithako ezifana ne-dextromethorphan, isicindezeli sokukhwehlela.
Yize yomibili le mithi ilapha izimpawu ezibandayo ezijwayelekile, iSudafed neMucinex zihluke kakhulu. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kunemikhiqizo eminingi emashalofini enezithako eziningi ezibandakanya i-pseudoephedrine noma i-guaifenesin noma kokubili, kepha simane nje sigxile kumkhiqizo wesithako esisodwa weSudafed vs Mucinex lapha. Ngenkathi uthenga ekhemisi, usokhemisi angakusiza ukuthi uthole ukuthi imuphi umkhiqizo ofanele izidingo zakho.
Umehluko omkhulu phakathi kweMucinex vs. Sudafed
Isigaba sezidakamizwa Ukuqedwa kwamakhala I-Expectorant (yokucinana kwesifuba, ukukhwehlela kwe-phlegmy)
Ngubani igama elijwayelekile? I-Pseudoephedrine Guaifenesin
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? Ukukhishwa ngokushesha kanye namaphilisi asebenza isikhathi eside, uketshezi lwezingane Amathebulethi, uketshezi (izinhlobo zezingane nezabantu abadala ziyatholakala), ukuncibilika okuncane kwezingane
Uyini umthamo ojwayelekile? Abantu abadala nezingane ezineminyaka engu-12 nangaphezulu: amathebhu angama-30 mg, amaphilisi ama-2 njalo emahoreni ama-4 kuye kwayisithupha njengoba kudingeka. Amaphilisi aphezulu ayi-8 emahoreni angama-24
Abantu abadala nezingane ezineminyaka engu-12 nangaphezulu: 120 mg amathebhu wokukhishwa okwandisiwe. Ithebhulethi eli-1 njalo emahoreni ayi-12 njengoba kudingeka Abantu abadala: amaphilisi wokukhishwa enwetshiwe angama-600 mg. 1-2 amaphilisi njalo emahoreni ayi-12 ngengilazi egcwele yamanzi
Yelashwa isikhathi esingakanani? Isikhathi esifushane, lapho kudingeka khona ukukhululeka kwezimpawu Isikhathi esifushane, lapho kudingeka khona ukukhululeka kwezimpawu
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Izingane ezineminyaka engu-4 ubudala nangaphezulu, abantu abadala Izingane ezineminyaka engu-4 ubudala nangaphezulu, abantu abadala
Ufuna intengo engcono kuMucinex?
Bhalisela izexwayiso zamanani eMucinex bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Izimo eziphathwa yiSudafed neMucinex
I-Sudafed (amakhuphoni aseSudafed | imininingwane ye-Sudafed) yinto yokuqeda amandla emakhaleni esetshenziselwa ukukhulula ukuminyana kwengcindezi nengcindezi okwesikhashana. Kubuye kube okwesikhashanaiqeda ukucinana kwamakhala ngenxa yomkhuhlane ovamile, i-hay fever, noma okunye ukungezwani komzimba okuphezulu.
I-Mucinex iyi-decongestant yesifuba, noma i-expectorant, okuyiisiza ukukhulula i-phlegm (mucus). Iphinde isize uketshezi oluncane lwe-bronchial, kukusiza ukukhwehlela futhi ulahle amafinyila (kwesinye isikhathi abizwa ngokuthi ukukhwehlela okukhiqizayo).
Isimo Udidekile UMucinex
Ukukhululeka kwesikhashana kokuminyana kwesinusi nengcindezi Yebo Akunjalo
Ukukhululeka kwesikhashana kokucinana kwamakhala ngenxa yomkhuhlane ovamile, i-hay fever, ukungezwani komzimba Yebo Akunjalo
Kuxegisa i-phlegm futhi kunciphise uketshezi lwe-bronchial Akunjalo Yebo
Ingabe iSudafed noma iMucinex isebenza kangcono?
Njengoba iSudafed ilapha ukucinana kwamakhala, kanti iMucinex ilapha ukuminyana kwesifuba / ukukhwehlela okukhiqizayo, ukuqhathanisa ukusebenza kwayo kufana nokuqhathanisa ama-aphula namawolintshi, njengoba kuyimithi ehlukile yezinkomba ezihlukile. Kodwa-ke, singabheka ukusebenza komuthi ngamunye.
I-Sudafed ikhonjisiwe njenge- ukwelashwa okuphephile nokusebenzayo ukuminyana kwamakhala. I-Mucinex ikhonjisiwe ukuthi iphephile futhi iyasebenza ekwelapheni ukuminyana kwesifuba .
Kokubili iSudafed neMucinex kungasebenza kakhulu ekwelashweni kwabo; kodwa-ke, lapho uzikhethela umuthi, ngaso sonke isikhathi kungcono kakhulu ukubuza kumhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo onomlando wakho ophelele wezokwelapha futhi ongakusiza ukhethe umuthi ofanele kakhulu.
Ukuqhathaniswa kanye nezindleko zokuqhathaniswa kweSudafed vs. Mucinex
I-Sudafed ayijwayelekile imbozwe umshwalense noma i-Medicare Part D. Umthamo ojwayelekile ongawuthenga ekhemisi ibhokisi lamaphilisi angama-24 (30 mg), ngenani elijwayelekile lama- $ 5-10.
IMucinex nayo ayihlanganisiwe imishwalense noma iMedicare Part D. Umthamo ojwayelekile wokuthengwa ekhemisi ibhokisi lamathebulethi angama-20 (600 mg, ukukhululwa okunwetshiwe), ngentengo ejwayelekile ka- $ 10-15.
Ungasebenzisa ikhadi le-SingleCare ongagcina kuloUdidekilenomaUMucinex.
Ngokuvamile embozwe umshwalense? Akunjalo Akunjalo
Imbozwe ngokwejwayelekile yi-Medicare Part D? Akunjalo Akunjalo
Umthamo ojwayelekile Ibhokisi lamaphilisi angama-24, 30 mg Ibhokisi lamaphilisi angama-20, 600 mg
Inkokhelo ejwayelekile yeMedicare Part D Ayikho Ayikho
Izindleko ze-SingleCare $ 4-5 $ 11-12
Imiphumela emibi ejwayelekile yeSudafed neMucinex
Imiphumela emibi ejwayelekile ye-Sudafed ifaka ukwethuka, ukungahlaliseki, nenkinga yokulala. Imiphumela emibi ejwayelekile ingafaka ikhanda, ukukhuphuka kwenhliziyo, noma ukuchama okubuhlungu.
NgeMucinex, imiphumela emibi ayivamile kepha ingafaka isiyezi, ikhanda, isifo sohudo, noma isicanucanu.
Noma ngabe uthatha iSudafed noma iMucinex, qiniseka ukuthi ulandela izinkomba zephakeji futhi awudluli umthamo ophakanyisiwe ophakanyisiwe. Uma unemiphumela emibi ekhathazayo, yeka imithi bese uthintana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo.
Ngabe i-prednisone izovela ekuhlolweni kwezidakamizwa
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kweSudafed vs. Mucinex
Iziguli ezithatha i-i-prescription monoamine oxidase inhibitor (MAOI), efana ne-selegiline noma i-tranylcypromine, akufanele isebenzise iSudafed ngasikhathi sinye, noma amasonto amabili ngemuva kokumisa i-MAOI.
ISudafed ibuye isebenzisane nezidambisigciwane ezithile ezifana no-Elavil ( amithole ) noma i-Desyrel ( trazodone ). Kufanele futhi ubonane nodokotela wakho uma uthatha imishanguzo ethile efana ne-Xanax (alprazolam), imithi yekhanda efana ne-Fioricet, imishanguzo ye-ADHD, kanye namaphilisi ezinhlungu. Uhlu lwemithi engahle isebenzisane neSudafed lude kakhulu ukuthi lungabhalwa lapha; thintana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola eminye imininingwane.
I-Mucinex (guaifenesin) iyodwa ayinakho ukuxhumana okuphawulekayo kwezidakamizwa, kepha kukhona ukuxhumana kwezidakamizwa nemikhiqizo yenhlanganisela equkethe i-guaifenesin eminye imithi , njengeMucinex-DM noma iMucinex-D. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola isiqondiso.
iyini imiphumela emibi yokuthatha i-meloxicam?
Isigaba sezidakamizwa Izidakamizwa Udidekile UMucinex
MAOI I-Eldepryl (selegiline), iParnate (tranylcypromine) Yebo Akunjalo
Amanye ama-anti-depressants I-Desyrel (trazodone), i-Elavil (amitriptyline), i-Pamelor (i-nortriptyline) Yebo Akunjalo
I-Benzodiazepines I-Xanax (alprazolam), Ativan (lorazepam), Klonopin (clonazepam) Yebo Akunjalo
Ukwelashwa kwekhanda I-Fioricet (i-butalbital), i-acetaminophen, i-caffeine, Yebo Akunjalo
Ama-painkillers ICodeine, i-methadone, i-oxycodone, i-Ultram (i-tramadol) Yebo Akunjalo
Imithi ye-ADHD I-Vyvanse (lisdexamfetamine) Yebo Akunjalo
Izexwayiso nge-Sudafed neMucinex
ISudafed inezinye izexwayiso okufanele ikhunjulwe. Itkungadala ukwethuka, isiyezi, noma ukulala.Njengoba kushiwo ngenhla, uma uthathai-monoamine oxidase inhibitor (MAOI), efana ne-selegiline noma i-tranylcypromine, ayithathi iSudafed. Futhi, vumela amasonto amabili ngemuva kokumisa i-MAOI ngaphambi kokusebenzisa iSudafed.
Uma unezimo ezithile zempilo, kufanele ubuze nodokotela wakho ngaphambi kokusebenzisa iSudafed. Lokhu kufaka phakathi izinkinga zenhliziyo, umfutho wegazi ophakeme (umfutho wegazi ophakeme), isifo segilo, isifo sikashukela, noma i-prostate ekhulisiwe.
Ukukhubazeka akufanele kusetshenziswe ku-trimester yokuqala yokukhulelwa. Ungahle ukwazi ukusebenzisa iSudafed (pseudoephedrine) kufayela le- i-trimester yesibili noma yesithathu kepha kuzodingeka uthintane nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo. I-Sudafed ingasetshenziswa kwesinye isikhathi ngenkathi uncelisa, kepha kuphela uma udokotela wakho evuma. I-Sudafed-PE (phenylephrine) akufanele isetshenziswe ngesikhathi sokukhulelwa.
IMucinex nayo inezexwayiso eziningana. Kufanele uthintane nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ngaphambi kokusebenzisa iMucinex uma unesifo sokukhwehlela esiphikelelayo noma esingapheli njengaleso esenzeka ngokubhema, i-asthma, i-bronchitis engamahlalakhona, noma i-emphysema; noma ukukhwehlela okuhambisana nenani elikhulu kakhulu lamafinyila.
Amaphilisi wokukhishwa okwandisiwe kwe-Mucinex akufanele achotshozwe noma ahlafunwe. Ithebhulethi kufanele ithathwe ngengilazi egcwele yamanzi.I-Mucinex ingasetshenziselwa ukukhulelwa, futhi ngokuqapha ngesikhathi sokuncelisa, inqobo nje uma umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo evuma.Izingane ezingaphansi kweminyaka emine akufanele zithathe imishanguzo ebanda njengeSudafed noma iMucinex. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuze uthole iseluleko.
I-Sudafed noma i-Mucinex ingasiza ekulawuleni izimpawu; noma kunjalo, azelaphi izifo ezibangelwa amagciwane, njengesifo sesono. Uma izimpawu zakho zinzima noma zingathuthuki, qiniseka ukubona udokotela wakho ngoba ungadinga ama-antibiotics.
Imibuzo ebuzwa njalo mayelana neSudafed vs. Mucinex
I-Sudafed iqukethe i-decongestant yamakhala ebizwa nge-pseudoephedrine. Kuyasiza ukukhulula ikhala eligcwelengenxa yomkhuhlane ovamile, i-hay fever, noma ezinye izifo zokuphefumula eziphezulu.
I-Mucinex iqukethe i-expectorant ebizwa nge-guaifenesin. IGuaifenesin isiza mncane futhi ikhulule ukuminyana kwesifuba lapho une-phlegmy, noma ukukhwehlela, okukhiqizayo.
Ngabe iSudafed neMucinex ziyefana?
Cha. I-Sudafed iqukethe i-pseudoephedrine futhi isetshenziselwa ukuminyana kwamakhala noma ikhala eligcwele. IMucinex iqukethe i-guaifenesin futhi isetshenziselwa ukukhulula ukuminyana kwesifuba.
Ngabe i-Sudafed noma i-Mucinex ingcono?
Umuthi ngamunye usetshenziselwa inhloso ehlukile. Uma uhlangabezana nokucinana kwamakhala, futhi ungenayo eminye yemibandela yezempilo ebhalwe ezixwayisweni ezingenhla, ungahle uthande ukuthatha iSudafed. Futhi uma ukhwehlela i-phlegm eningi, ungahle uthande ukuthatha iMucinex.
Ngingayisebenzisa iSudafed noma iMucinex ngenkathi ngikhulelwe?
Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuthola izeluleko ezenziwe zaba ngezakho. Ngokuvamile, iSudafed ayinakuthathwa ku-trimester yokuqala kepha ingathathwa ngezikhathi ezithile phakathi ne-trimester yesibili neyesithathu inqobo nje uma ungenaso isifo senhliziyo, umfutho wegazi ophezulu, njll. ISudafed-PE (phenylephrine) ayikhuthazwa ekukhulelweni.
I-Mucinex ingasetshenziswa ngokuphepha lapho ukhulelwe. Futhi, qiniseka ukuthi ubuza nodokotela wakho ngaphambi kokusebenzisa iSudafed noma iMucinex ngenkathi ukhulelwe.
Ngingasebenzisa iSudafed noma iMucinex ngotshwala?
Kungcono ukugwema utshwala ngenkathi uthatha le mithi. Ezinye izinhlobo zeSudafed noma iMucinex ziza njengomuthi ohlangene, onemithi eminingana kweyodwa. Utshwala bungaqinisa umthelela weminye yale mithi, bube nemiphumela emibi kakhulu, futhi bube nokukhubazeka okwengeziwe. Kuphephile ukulinda uze uzizwe ungcono ngaphambi kokuphuza utshwala.
Ngabe iMucinex neSudafed zingathathwa ndawonye?
Ungazithatha zombili zihlangane uma unesiminyaminya samakhala kanye nesikhwehlela se-phlegmy.
Ngabe i-Sudafed noma i-Mucinex ingcono nge-post nasal drip?
Kuya ngokuthi yini izimpawu uhlangabezana. Uma uzizwa sengathi une-phlegm eningi, iMucinex ingahle izame ukuzama. Uma i-drip ihambisana nokucinana kwamakhala, ungazama i-Sudafed. Ungazama futhi ukusebenzisa isihlanganisi egumbini lakho, uphuze uketshezi oluningi, usebenzise isixazululo sokunisela ngamakhala, futhi ulale ikhanda lakho lixhomeke emicamelweni.
Ingabe i-Mucinex i-decongestant?
IMucinex ibhekwa njengesinqanda mafutha ngoba ikhulula amafinyila futhi ikusize ukuthi usikhwehlele. Akusizi uma unekhala eligcwele noma isiminyaminya samakhala.
Ngabe ama-statins nokusetshenziswa kotshwala kuyahlangana?
uyini umehluko phakathi kwe-psyllium husk ne-metamucil
ingabe i-gabapentin izokwenza uhluleke ukuhlolwa kwezidakamizwa
kwenzekani lapho uthatha i-tylenol ephelelwe yisikhathi
ngingayithenga kuphi i-nebulizer esitolo
Ngingathatha i-aleve uma ngikhulelwe
ihlala isikhathi esingakanani i-vyvanse 50 mg